12 / 08 / 2021 12 / 08 / 2021 ရော့ Paton 875 Views စာ5မှတ်ချက် 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်, Black Falcon, တည်ဆောက်, ရဲတိုက်, Classic ရဲတိုက်, ဖန်ဆင်းရှင်, Creator 3-in-1, သီးသန့်တည်ဆောက်ခြင်း, ဘယ္လို, Lego, Lego တည်ဆောက်, Lego ရဲတိုက်, Lego ဖန်တီးသူ, Lego Creator 3-in-1, Lego စိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်မှု, Lego ဘယ်လိုရန်, Lego MOC, LEGO MOD, Lego စတိုး, LEGO.com, ကောက်ယူပါ
31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် အခြေခံအားဖြင့်ကြီးမြတ်သည် Lego set နဲ့areturn ကိုaကြိုဆိုပါတယ် classic theme - ဒါပေမယ့်ဒီ့ထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိတယ်။
31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် ဒါကငါတို့ဒီမှာအချိန်အများကြီးရှိတယ် Brick Fanaticsမရ။ ငါတို့ရေးခဲ့သလိုဘဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးစိတ်သုံးသပ်မှု ၏ Creator 3-in-1 လက်ရာ၊ ၎င်းသည်ခေတ်ကိုလွမ်းဆွတ်စေသည် classic ရှေးခေတ်မှအကြောင်းအရာကိုခေတ်သစ် p နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်arts နှင့်နည်းစနစ်များသည် 'လက်တွေ့ကျပြည့်စုံသောရလဒ်များ' အတွက်နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။
စိန်ခေါ်မှုဒီဇိုင်းလက်ကျန်အတွင်းဖြစ်နိုင်သောအရာအတွက် Creator 3-in-1 ဆောင်ပုဒ် (အားလုံး parts ကို main model တစ်ခုဖန်တီးပြီးအဲဒီ p တွေထဲကတစ်ခုကိုလုပ်ရမယ်arts ကိုအခြားအကြောင်းအရာအလိုက်ဆက်စပ်သောပုံစံနှစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန် s ကိုထပ်မံအသုံးပြုရန်လိုသည်။ ) ap အလုပ်လုပ်သည်artပါဝင်သောအပိုင်းအရေအတွက်တွင် icular ဘတ်ဂျက်၊ အောက်ပါ partတည်ဆောက်ပုံသမာဓိနှင့်ကစားနိုင်မှုတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိ icular ဒီဇိုင်းစည်းမျဉ်းများ၊ (ဤကိစ္စတွင် ၉+) ၌ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောနှင့်အတော်လေးငယ်ရွယ်သောထောက်ခံချက်သို့၊ 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် အောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
မည်သည့်သတ်မှတ်ချက်မဆိုမည်သည့်အရာအတွက်မဆို၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပျော်စရာကောင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသောအစုံဖြစ်သည် Brick Fanatics လူကြီးများဟန်ဆောင်နေသောသူများအကြောင်းပြောခြင်းကိုမရပ်နိုင်ပါ။
ဒီလိုပြောရင်မင်းဒီအစုရဲ့အသက်အရွယ်ထောက်ခံချက်ကိုပယ်ဖျက်နိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ ဖွဲ့စည်းပုံသမာဓိအတွက်အကြွင်းမဲ့လိုအပ်မှုကိုမေ့နေသလား။ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတောင်ဘတ်ဂျက်ကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သလား။ ပိုကောင်းတဲ့ဗားရှင်းရှိပါသလား 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် တည်ဆောက်ရန်
ငါတို့ကဘာလဲဆိုတာကိုမျက်လုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ပြောနေတာ Lego ပရိတ်သတ်အသိုင်းအဝိုင်းသည်ရဲတိုက်တည်ဆောက်ရေးနယ်ပယ်၌နှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီဖြစ်သည်။ အမြန်ဖြတ်ပြီးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည် Instagram ကို နှင့် Flickr ကို လှုံ့ဆော်ရန်လှုံ့ဆော်ရန်အံ့သြဖွယ်ရဲတိုက်နှင့်ပတ်သက်သောဖန်တီးမှုများမည်မျှရှိသည်၊ နှင့်ကန့်သတ်ချက်မရှိပဲဖြစ်နိုင်သည့်အရာကိုသာပြလိမ့်မည်။ Lego set ဒီဇိုင်နာများမျက်နှာ။
အဲဒါတွေကိုတရားဝင်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ Lego ဒီဇိုင်းကန့်သတ်ချက်များ၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရာ၏အဓိကအချက်ကိုထိန်းသိမ်းပြီးနောက်ပျော်စရာနှင့်အလွန် sm အချို့ကိုအသုံးချပါart ပရိတ်သတ်အသိုင်းအဝိုင်းတွင်ပြသသည့်နည်းစနစ်များ (အချို့မှာပိုမိုအဆင့်မြင့်သို့ခိုးဝင်သည် Lego သူတို့ကိုယ်သူတို့သတ်မှတ်တယ်) ငါတို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်လဲ၊ တိုးတက်အောင်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်?
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက် - ငါတို့ဒီနေရာမှာ AFOL အပြည့်အဝမသွားဘူး။ လမ်းညွှန်ချက်အချို့မှကျွန်ုပ်တို့ဝေးကွာနေလျှင်ပင် Lego ဒီဇိုင်နာတွေကလိုက်နာရမယ်၊ ငါတို့ကဒီစီမံကိန်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်လှမ်းမီအောင်ထိန်းထားတယ် Lego သရုပ်ပြနည်းစနစ်များနှင့်အလားအလာရှိသောဘတ်ဂျက်လိုအပ်သောပရိသတ်နှစ် ဦး အတွက်အုတ်ခွက်နှစ်စုံအတွက် Pick & Build နံရံသို့တွက်ချက်ခရီးတစ်ခုသည်သင်လိုအပ်သောအရာကိုရလိမ့်မည်။
31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် အနီနှင့်အဖြူရောင်စာတန်းများနှင့်တောက်ပသောအစိမ်းရောင်သစ်ပင်၊ တောက်ပသောကြက်နှင့်ကြက်၊ အပြာရောင်ရေကဲ့သို့သောအခြားအသေးစိတ်များမှတဆင့်အရှေ့တွင်အရောင်လေးလံသောနံရံများနှင့်အတူတည်ဆောက်ထားသည်။ မရ။
play point of view မှ ၀ င်ရောက်ခံစားရန်များစွာရှိသည်၊ သို့သော်မြင်ကွင်းပြသရာမှဤနေရာများသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ငယ်ရွယ်ပြီးစစ်တိုက်ရန်ခိုင်မာသောခံတပ်ဖြစ်မည့်အရာများအတွက်အနည်းငယ်အလုပ်ရှုပ်ပြီးတောက်ပြောင်စေသည်။ ရဲတိုက်တစ်ခု
ငါတို့လုပ်ချင်တဲ့အရာကမော်ဒယ်လ် 'အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်း'၊ အရိုးရှင်းဆုံးအရောင်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ရိုးရှင်းသည့်နည်းလမ်းဖြစ်ပြီးနံရံများသို့အရောင်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရရှိရန်နည်းစနစ်များစွာရှိသည်၊ ၎င်းတွင်အစုံသုံးပြီးသားအချို့အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
ရဲတိုက်တစ်ခုကဲ့သို့တည်ဆောက်ရန်အရသာနှင့်မျိုးစုံထည့်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာအရောင်များကိုပြောင်းရန်နှင့်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည် 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် အရမ်းကောင်းနေပြီ။ ဘယ်မှာလဲ Lego လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၃၀ ကရဲတိုက်သည်တစ်ပြင်လုံးကိုမီးခိုးရောင်ဖျော့ဖျော့ရှိခဲ့ပြီးရံဖန်ရံခါရိုက်နှိပ်ထားသော p များဖြင့်သာကျိုးပဲ့သွားလိမ့်မည်artယနေ့မီးခိုးရောင်နှင့်အမှောင်အတွက်မီးခိုးရောင်အချို့ကိုပြောင်းလဲနေသည်artသံလွင်စိမ်းကဲ့သို့ hy အရောင်များသည်အခြားတည်ဆောက်မှုနည်းစနစ်တစ်ခုမှဖယ်ခွာရန်မလိုဘဲတည်ဆောက်ပုံနှင့်အသက်ကိုပေးသည်။
လမ်း Lego ပုံစံအားလုံးကို ဖြတ်၍ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့များကိုအရောင်ကိုယေဘုယျအားဖြင့် underrated, partဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒါကိုကောင်းကောင်းလုပ်နေတာကိုမင်းဒါကိုသတိမပြုမိဘူး။ ၎င်းကဲ့သို့အစုံများပေါ်တွင်နေရာယူနိုင်သည် 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် အခြားရိုးရှင်းသောတည်ဆောက်နည်းစနစ်များကိုဖုံးကွယ်ရန်ကူညီသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်မည်သည့်တည်ဆောက်သူအတွက်မဆိုကောင်းမွန်သည်artထွက်ခြင်း (သို့) ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောအဆင့်တွင်သင်၏ဖန်တီးမှုအတွက်အခြားအဆင့်တစ်ခုကိုထည့်နိုင်သည်။
ပန်းရန်အုတ်များအတွက်အုတ်များကိုလဲလှယ်ခြင်းသည်ရဲတိုက်နံရံသို့ texture ထည့်ရန်လျင်မြန်ပြီးသိသိသာသာထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တစ်ခြားပြားချပ်ချပ်နံရံတစ်လျှောက်တွင်ပန်းရံအုတ်များကိုအမှတ်တမဲ့နေရာချခြင်းသည်အသေးစိတ်အနည်းငယ်မိတ်ဆက်နိုင်ပြီးလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်အလွန်လွယ်ကူသောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လှည့်ကွက်သည်သင်မည်မျှသုံးသည်ကိုမရွေး (ထို့ကြောင့် Pick & Build နံရံ၌ခွက်ကြီးသုံးခွက်ဖြည့်ရန်မလိုပါ၊ ငါတို့တွေ့သည်)၊ ၎င်းတို့ကိုဘေးချင်း ကပ်၍ အခြားတစ်ခု၏ထိပ်၌တစ်ဖြောင့်တည်းသုံးပါ။ မရ။
၎င်းသည်အခြေခံနည်းပညာတစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းကိုထပ်မံအသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည် 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်ဒါပေမယ့်သိသိသာသာဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့အစုံအစုံကိုလက်တွေ့သင်လွယ်လွယ်ကူကူတွေ့ရလိမ့်မယ် 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာတစ်ခုအတွက်၊
ဤပရောဂျက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပန်းရန်အုတ်သည်အလွန်အသုံးဝင်သည် Lego တစ်ခြမ်း၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ palette ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့လိုက်ဖက်ဖို့မီးခိုးရောင်အပိုင်းအစတွေအတွက်အမှောင်မီးခိုးရောင်ကိုဖလှယ်လိမ့်မယ်။
ထိပ်တွင်တည်ဆောက်ခြင်းမရှိသော Studs သည်သင်တည်ဆောက်သည့် ဦး တည်ရာကိုပြောင်းလဲသည့်မည်သည့်နည်းစနစ်ကိုမဆိုရည်ညွှန်းသည်။ သူတို့၏ဘေးမှ studs များနှင့်အုတ်များ (အုတ်များနှင့် Erling အုတ်များ) သည်နံရံတစ်ခုလုံးကိုတည်ဆောက်နိုင်ပြီးဖြစ်နိုင်ချေများနှင့်အမျိုးအစားများနှင့်ပြည့်စုံသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးရန်၎င်းတို့ဘက်မှကြယ်သီးများကိုအသုံးမပြုမီနံရံများကြားတွင်နေရာအနှံ့နေရာယူနိုင်သည်။ အတူကစားရကျိုးနပ်သည်။
နံရံတစ်ခု၏အသွင်အပြင်ကိုသွေဖီစေရန်ဖန်တီးရန်သို့မဟုတ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအသွင်အပြင်ကိုဖန်တီးရန်ဤနည်းလမ်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ပိုမိုရွေးချယ် အသုံးပြု၍ ၎င်းသည်ကြီးမားသောနံရံမျက်နှာ၏ထောင့်များ၊ ခြေစွပ်များ၊ အထိန်းများ (သို့) ကြိုကြားကြိုကြားနေရာများအတွက်သုံးသောအခါရဲတိုက်တည်ဆောက်ရန်စိတ်ဝင်စားစရာအချက်များကိုထည့်နိုင်သည်။ ဤဥပမာအချို့ကိုလည်းတွေ့နိုင်သည် 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ ကျောက်ထောင့်များနှင့်တံခါးများကျော်၌သေးငယ်သောတံခါးပေါက်များရှိသည်။
SNOT နည်းစနစ်များကိုပွေ့ဖက်ရန် (ပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောပြတင်းပေါက်များဖွင့်ရန်) ကိုသုံးနိုင်သည်။ ပိုမိုရိုးရှင်းသောတည်ဆောက်မှုအဖြစ်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မြင်သောအရာအတွက် 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် ဒါကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြတယ်။
SNOT နည်းစနစ်များကို ထပ်မံ၍ ယူခြင်းသည်အလွှာများစွာ၏နံရံများကိုအက်ကွဲစေပြီးအပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်များအောက်၌အ ၀ တ်မဲ့အုတ်များပေါ်လာသည်။ ၎င်းကိုလိမ္မာပါးနပ်သောအရောင်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်အလွန်လက်တွေ့ကျသောအရာများကိုဖန်တီးနိုင်သည် Lego ဖန်တီးမှုများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပိုမိုရိုးရှင်းသော SNOT နည်းစနစ်အချို့ကိုရိုးရှင်းစွာအသုံးပြုခြင်းသည်နံရံမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်ကျပန်းသွေဖီမှုများဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။
ပန်းကန်များ၊ လုံးဝန်းသောပန်းကန်များ၊ ဆွယ်တာပန်းကန်များနှင့်အုပ်ကြွပ်များသည်အခြားမြေပြန့်နံရံတစ်လျှောက်တွင်စိုစွတ်သောသို့မဟုတ်မညီညာသောတည်ဆောက်မှုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ပန်းကန်ပြားများအပါအ ၀ င်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထပ်ကာထပ်ကာစီထားသောပန်းကန်များသည်နံရံ၌ဤ 'အပွန်းအစလေးများ' နေရာများကိုဖန်တီးပေးသည်။
ဆောက်လုပ်ရေး၌ပုံစံတူသော်လည်းနံရံတစ်ခုသို့ခြေလှမ်းများကိုပိုမိုဖန်တီးရန် jumper ပြားများနှင့်ကြွေပြားများကိုမညီညာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အနည်းငယ်ပိုစရိုက်ရှိစေရန်ပန်းကန်များကြားတွင်စုထားနိုင်သည်။ ဤအရာများအားအာရုံစူးစိုက်မှုများကိုဖန်တီးရန်နှင့်အခြားကြီးမားသောယူနီဖောင်းနံရံတစ်ခုသို့ ၀ တ်ဆင်ပါ၊ သို့မဟုတ်၎င်းတို့သည်အလွန်မညီမညာတည်ဆောက်ပုံကိုသီးသန့်သုံးနိုင်သည်။
ပန်းကန်များ၊ အဝိုင်းပြားများနှင့် jumper ပြားများအတွက်အုတ်များကိုဖလှယ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းပုံစံကိုရာသီဥတုပြောင်းလဲစေသောအသွင်အပြင်ကိုအမှန်တကယ်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်.
အုတ်များကိုတောင်စောင်းများနှင့်ပြောင်းပြန်လျှောလျှောများ (ပန်းကန်များအမြင့်အလိုက်ကွဲပြား) သည်ရိုးရှင်း။ ပိုကြီးသော်လည်းနံရံများတွင်အက်ကွဲကြောင်းများဖန်တီးနိုင်သည်။ ရဲတိုက်နံရံတစ်ခုတွင်ဤအပိုင်းအစများကိုလိမ္မာပါးနပ်စွာနေရာချထားခြင်းသည်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုပြောပြနိုင်သည်၊ စစ်ပွဲအတွင်းထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သောအရာမှဖွဲ့စည်းပုံအားဖြတ်သွားသောသစ်ပင်သို့ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြရန်ကူညီနိုင်သည်။
သစ်ပင်နှင့်ခွဲထွက်ထားသောနံရံအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန်ဤအခြေခံနည်းပညာကိုသုံးရန်အနည်းဆုံးကြီးကျယ်သောအခွင့်အလမ်းနှစ်ခုရှိသည်။
အထက်ပါနည်းစနစ်များကိုရောစပ်ပြီးနေရာတိုင်းကိုအစားထိုးနံရံများတည်ဆောက်ရန်၎င်းတို့ကိုသုံးပါ 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် ငါတို့နောက်မှာရှိနေသော 'သက်ကြီးရွယ်အိုများ' ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နံရံကိုဂရုတစိုက် prizing ap ဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်art တစ်ချိန်တည်းတွင်နံရံ၏အပိုင်းများကိုဖယ်ရှားရန်ပုံစံ၏ဧရိယာများ မတည်ဆောက်ရသေးသောအခါငါတို့သည်ငါတို့၏တူညီသောနံရံ၏ပုံစံကို စုစည်း၍ ငါတို့ဖယ်ရှားခဲ့သောအရာများအစားပုံစံထဲသို့ပြန်ထည့်လိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အုတ် ၁ × ၂ ကိုသုံးခဲ့သည်art မဟုတ်ဘူး။ ၃၀၀၄)၊ ၁ × ၂ ပန်းရန်အုတ်များ (စart မဟုတ်ဘူး။ ၉၈၂၈၃)၊ ဆွယ်ပြားများ (စart မဟုတ်ဘူး။ ၁၅၅၇၃)၊ ၁ × ၁ နှင့် ၁ × ၂ အုပ်ကြွပ်များ (စစart nos ။ 3070b နှင့် 3069b), 1 × 1, 1 × 2, 1 ×3နှင့် 1 ×4ပန်းကန်များ (စart nos ။ ၃၀၂၄၊ ၃၀၂၃၊ ၃၆၂၃ နှင့် ၃၇၁၀)၊ ၁ × ၁ လုံးဝိုင်းထားသောပန်းကန်များ (စart မဟုတ်ဘူး။ တံခါး ၄၀၇၃၊ ၁ × ၂ ပြားများ၊ တံခါးရထား (part မဟုတ်ဘူး။ 23028) နှင့် 1 × 1 ရှေ့မီးကြီးအုတ်များ (စart မဟုတ်ဘူး။ ၄၀၇၀) ကို Erling bricks ဟုလည်းလူသိများသည်။
ဘတ်ဂျက်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၊ ဒါတွေအားလုံးသည်အရင်းအမြစ်လွယ်ကူသော p ဖြစ်သည်artBrickLink၊ s မှ LEGO.com နှင့်ထဲမှာ Lego စတိုးနံရံကိုရွေး။ တည်ဆောက်ပါ။ လိုအပ်သောပမာဏသည်မည်မျှ p ဖြစ်သည်artသင်မည်သည့်နည်းများကိုသုံးရန်သင်ရည်ရွယ်ထားသနည်း၊ သို့သော်ကြီးမားသော Pick & Build ခွက်နှစ်ခုကိုဖြည့်ရန်ညီမျှသောအကြမ်းဖျဉ်းနံပါတ်သည်လှည့်ကွက်ကိုပြုလုပ်သင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ဆောက်မှုနှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနည်းလမ်းသည်မှောင်မိုက်သောမီးခိုးရောင်အုတ်များကိုထိရောက်စွာဖယ်ရှားရန်နှင့်မီးခိုးရောင်အုတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုဖြင့်အစားထိုးရန်ပုံစံကိုတစ်လျှောက်လုံးအသုံးချခဲ့သည်။ ဤအရောင်ရွေးချယ်မှုသည်မော်ဒယ်တစ်လျှောက်ရှိအရောင်ကြမ်းတမ်းမှုကိုလျှော့ချရန်ကူညီသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အရောင်တစ်မျိုးတည်းဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနံရံများအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်စေသောအသေးစိတ်အချက်များကိုအမြင်အာရုံပြိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်မယှဉ်ဘဲတစ်ချိန်တည်းတွင်အမှန်ပေါ်လွင်စေသည်။
မင်းရဲ့ရဲတိုက်တည်ဆောက်မှုအတွက်အထက်မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့နည်းစနစ်တွေကိုဘယ်လိုပေါင်းစပ်ပြီးမင်းဘယ်လိုအသုံးချသလဲဆိုတာကအရသာသက်သက်သာသာဘဲ၊ အဲဒါကိုမလွန်ဘဲနံရံတွေကိုအလိုအလျောက်ထိုးဖို့ကျပန်းနဲ့မညီမညာလျှောက်လွှာကနေတဆင့်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နံရံတစ်ခုစီကို 1 × 1 ပန်းကန်များဖြင့်သာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခြားပန်းကန်ပြားအားလုံးသည်လုံးဝိုင်းထားသောပန်းကန်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်ကျိုးပဲ့မှု၏အမှတ်တမဲ့ကိုဆုံးရှုံးစေပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ယူနီဖောင်းပုံစံကိုစတင်ဖန်တီးကာနောက်ဆုံးတွင်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ ကွဲပြားခြားနားသောလက်တွေ့ကမ္ဘာနံရံတည်ဆောက်မှုနည်းစနစ်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ မင်းရဲ့ parts စုဆောင်းမှုသည်သင်၏ p အချို့ကိုအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ထားသည်art၎၊ အဲဒါကိုလက်ခံပါ။ တည်ဆောက်ခြင်း၌ချုပ်တည်းခြင်းသည်မိမိကိုယ်တိုင်၏နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
နံရံများကိုပြောင်းခြင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားအသေးစိတ်အချို့ကိုလှည့်ပတ်ကစားသည် 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် သူတို့ရဲ့တောက်ပမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် အထူးသဖြင့်၊ အဝါရောင်၊ အညိုရောင်နှင့်အပြာရောင်အိမ်ရာကဏ္aspectsများကိုရဲတိုက်၌ထားခဲ့သည် (သူတို့တကယ်ပြန်ခေါ်သည် Classic ရဲတိုက်နှင့်ပုံစံ၏ကြည်နူးဖွယ်အာရုံစိုက်မှု) ငါတို့သည်သစ်ပင်သစ်ရွက်များကိုeနှင့်အစားထိုးလိုက်သည်artသံစဉ်များ ဆွဲထုတ်သွားသောထောင်နံရံအား၎င်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်သို့အနည်းငယ်ပိုပေါင်းစပ်လိုက်သည်။ ကြက်၊ ကြက်များနှင့်တောက်ပသောပစ်မှတ်ကိုသစ်သားပစ်မှတ်ကိုမြှားနှင့် ဦး ညွှတ်တို့ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ တောက်ပသောအပြာရောင်ရေပြားများကိုမီးခိုးရောင်ကိုတူညီသောအရောင်များဖြင့်အစားထိုးပြီးအပေါ်မှဖြတ်တောက်ထားသောအပြာရောင်ကြွေပြားများကိုထည့်ပြီးရေအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုကောင်းအောင်ဖန်တီးပါ (သုံးခုတွင်သင်မြင်ဖူးသည်။ Lego Ninjago City အစုံ)
ကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲခဲ့သည့်အရာအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်၎င်းကိုပြုပြင်မွမ်းမံရာတွင်အရေးပါခဲ့သည် 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် မူလပုံစံ၏ယေဘူယျမူဘောင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်စေသောဒီဇိုင်းအစိတ်အပိုင်းများစွာကိုဆက်လက်ခံစားနေဆဲဖြစ်သည်။
ဤပရောဂျက်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်နှိုင်းရရိုးရှင်းမှုကိုသရုပ်ပြရန်ဖြစ်သည်city အချို့သောအလွန်ထိရောက်သောနည်းစနစ်များ၊ သို့သော်သင်ကြိုးစားလိုသောမည်သည့်ရဲတိုက်တည်ဆောက်မှုကိုမဆိုအသုံးချနိုင်သောပိုခက်ခဲသောနည်းလမ်းများစွာလည်းရှိသည်။ st ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာart ထိုသူများအတွက်တူးဖော်ခြင်းကိုဖွင့်ထားသည် Instagram ကို နှင့် Flickr ကိုမည်သည့်အပျော်တမ်း ဦး ရေမည်သည့်နေရာတွင်မဆို Lego artists တွေဟာတကယ့်ကိုစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့လက်ရာတွေကိုဖန်တီးနေပါတယ်။
ထိုအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည် 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် သင်နှင့်တူသောအရာတစ်ခုကိုသင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရန်လှုံ့ဆော်သည်။ အလားတူကုသမှုကိုခံယူထိုက်သောအခြားအုပ်စုများရှိပါသလား။ အောက်ပါမှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သောအလုပ်ကိုထောက်ပံ့ပါ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့် Lego ငါတို့တ ဦး တည်းမှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များမရ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဤကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာဖန်တီးရန်ကူညီပေးသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← Matthew Ashton သည် LEGO 40516 ၏မိတ္တူများကိုလက်မှတ်ထိုးသည်
LEGO 40486 Adidas Originals Superstar GWP သည်နောက်ဆုံးတွင်အောက်သို့ရောက်ရှိသည် →
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုLEGO ကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ Creator 3-in-1 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်"
ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်။ ပိုကြီးပြီးပိုကောင်းအောင်တည်ဆောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရဲတိုက်အစုံနှစ်ခုကို ၀ ယ်ခဲ့တယ်။ မင်းရဲ့တစ်ချို့ကိုသင်္ဘောပေါ်မှာငါယူမယ် ideas နှင့်နည်းစနစ်များနှင့်မှားသောအနီရောင်အဖြူရောင်စာတန်းများကိုကျိန်းသေဖယ်ရှားလိမ့်မည်။ ငါလည်းဓါးပြရုပ်သေးသေးလေးကိုဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မယ်။
အစုံတစ်ခု၏ကြေးမုံပုံသဏ္ဌာန်တည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားဖူးသလား။ ငါ modular အဆောက်အ ဦး သစ်အတွက်စိတ်ပျက်နေတဲ့အခါဒုတိယအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စတိုးဆိုင်ကို ၀ ယ်ခဲ့တယ်။ ငါအဲဒါကိုမှန်ပုံရိပ်နဲ့တည်ဆောက်ပြီးဆိုင်းဘုတ်တွေကိုပြောင်းလိုက်တယ်၊ သူတို့က“ BEST PETS” ဆိုတဲ့စာလုံးနှစ်လုံးကိုဘေးချင်းယှဉ်ပြီးနေရာယူထားတယ်။ အတွင်းပိုင်းကိုလက်လီရောင်းချရန်နေရာနှစ်ခုဖန်တီးရန်အတွင်းခန်းကိုအလွယ်တကူပြုပြင်နိုင်သည်၊ ယခုကျွန်ုပ်တွင်ခွေးများနှင့်ကြောင်အတွက်သီးခြားတစ်ခုရှိသည်။
မြို့ရိုးများသည်ရေကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ အလွန်အသေးစိတ်သောနံရံများနှင့်အလွန်နိမ့်သော poly looking terrain p အကြားအလွန်ကွာခြားချက်ရှိသည်။arts.
ရော့၊ မင်းကကြယ်ပဲ။ ဒီနေ့ကငါ့ရဲ့ ၇၀ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်ပြီးငါ့ခင်ပွန်းကငါ့ကိုဘာဝယ်ခဲ့လဲဆိုတာခန့်မှန်းကြည့်ပါ။ ငါလုံလောက်တဲ့ p ကိုထုတ်ပြီးပြီarts ကိုကျွန်ုပ်၏ယေဘူယျ stash တွင် main set ထဲသို့ထည့်သွင်းရန်အခြားရွေးချယ်စရာတည်ဆောက်မှုများပြုလုပ်ရန်သင်ယခုငါ့ကိုထပ်မံပေးခဲ့သည် ideas.
Lego ကငါငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းမဟုတ်ဘူး၊ Bayko နဲ့ငါတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့အခုငါ့ရဲ့ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုအတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်။ ပိုကြီးတဲ့အိမ်တစ်လုံးလိုအပ်တယ်။
မင်းမှာမွေးနေ့ကောင်းတစ်ခုရှိခဲ့ပြီး LEGO အတွက်နေရာလွတ်ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါတို့နေရာလွတ်ကုန်သွားပြီလို့ငါတို့ဆက်တွေးနေတယ် Brick Fanaticsဒါပေမယ့်ငါတို့ကအမြဲတမ်းလိုလိုနောက်ဆုံးမှာအီးတစ်ခုတွေ့တယ်xtra သိုလှောင်မှုအနည်းငယ် (သို့) ဟိုမှာ ...